पूर्व युवराज पारसलाई फेरि लाग्यो यस्तो जटिल रोग! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पूर्व युवराज पारसलाई फेरि लाग्यो यस्तो जटिल रोग!
admin March 9, 2020 जीवनशैली, समाचार	0
काठमाडौं, २६ फागुन । पूर्वयुवराज पारस शाहलाई दुई पटक हृदयघात भइसकेको छ । उनलाई एक पटक विदेशमै रहँदा हृदयघात भएको थियो भने एक पटक नेपालमै रहँदा हृदयघात भएको हो । उनलाई अहिले फेरी अर्को जटिल प्रकारको रोग पार्किन्सन्स भएको चर्चा चलेको छ । जटिल किसिमका हृदयघातको सामना गरेका पूर्वयुवराज पारसलाई पार्किन्सन्स भएको बताइएको छ ।
यद्यपि यसबारे पूर्वयुवराज पारस तथा पूर्वराजपरिवारले भने औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिकृया जनाएका छैनन् । केही समय यता पूर्वयुवराज पारस एक्लै वस्दै आएका छन् । उनी परिवारका साथमा छैनन् । पूर्वयुवराज पारसले आफै पनि यसवारे केही बताएका छैनन् । तर, पारसनिकट स्रोतकाअनुसार उनलाई पार्किन्सन्स भएको हो ।
पार्किन्सन्स उपचार उनले कहाँ गराएका छन् भन्ने वारे पनि केही खुलेको छैन । उनले औषधी पनि कहाँवाट र कस्तो सेवन गरेका छन् भन्ने पनि खुलेको हो । तर, केही समययता पूर्वयुवराज पारस पार्किन्सन्सबाट पीडित भएको बताइएको हो । पारिवारवाट बाहिर बस्दै आएका उनी केही समय यता युट्युबर सोनिका रोकासँग सम्बन्धका कारण अनावश्यक चर्चामा आएका छन् ।
हालै गोदावरीको जंगलमा साधुहरुसँग बसेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको थियो । स्वतन्त्र रुपमा हिँड्न चाहने पूर्वयुवराज पारसलाई थाइल्याण्डमा रहँदा र पछि स्वदेश आएपछि ग म्भीर प्रकृतिको हृद यघात भएको थियो । अहिले उनी आफु स्वतन्त्र रुपमा बस्न चाहेको भन्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा घुम्ने गरेका छ् । जहाँ जाँदा पनि सोनिकाका साथमा देखिने गरेका कारण उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा अनावश्यक चर्चा हुने गरेको छ । यद्धपी उनीहरुले आफुहरुबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध नभएको बताएका छन् ।
राजधानीमा शान्त फागु पूर्णिमा (होली)
काठमाडौँ – फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा (होली) पर्व राजधानीलगायत हिमाली र पहाडी जिल्लामा अपेक्षाकृत शान्तरूरुपमा मनाइरहेका छन् ।
विगत वर्षमा फागु पूर्णिमा (होली) मा मानिसको इच्छाविपरीत रङ दल्ने र पानीका लोला हान्ने गरिन्थ्यो । यस वर्ष त्यस्तो काम रोकिएको छ । केही वर्षदेखि नै फागु पूर्णिमामा तडकभडक रोकिँदै आएको थियो । यस वर्ष नेपाल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिममा रहेकाले प्रशासनले शान्तरूपमा पर्व मनाउन आह्वान गरेको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको प्रभाव नदेखिए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उच्च जोखिममा राखेकाले सतर्कता अपनाउन प्रशासनले अनुरोध गरेको हो ।
फागु खेल्ने प्रायः बालबालिका छन् । बालबालिकाले पनि विगतमा जस्तो सडकमा हिँड्ने मानिसलाई रङ दल्ने र पानीका लोला हान्ने गरेका छैनन् । गाडी रिजर्भ गरेर होली खेल्दै हिँड्ने मानिसको भीड नगण्य छ । चाबहिल चोकमा फागु पर्व मनाइरहेका युवा सन्तोष भण्डारी चिनजानका साथीभाइबीच मात्र पर्व मनाउने तर सडकमा सवारी र पैदल यात्रा गर्नेलाई केही नगर्ने बताउँछन् ।
चिसो नघटेका कारण पानी छ्याप्दा कोरोनाका जीवाणुले असर गर्नसक्ने भएकाले पनि आम मानिस यस वर्ष सचेत भएका देखिन्छन् । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देशका रूपमा फागु मनाउने गरिएको हो ।
विशेषगरी युवतीलाई लोलामा पानी भरेर एक हप्ता अघिदेखि नै छ्यापेर मनोवैज्ञानिकरूपमा बाहिर निस्कन नसक्ने वातावरण बनाइन्थ्यो । यस वर्ष फागु पर्वकै दिन पनि सहजरूपमा हिँडडुल गर्न सकेको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा बिरामी भेटेर फर्कनुभएकी सुनिता ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
यस पर्वका अवसरमा आज काठमाडौँको वसन्तपुरमा उपस्थित मानिसले वातावरणलाई नै रङ्गीचङ्गी तुल्याउँदै त्यहाँ गाडिएको चीरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजागाजाका साथ टँुडिखेलमा लगी जलाउँछन् । उक्त चीरमा राखिएका ध्वजापताकाहरू औषधोपचारको रूपमा काममा आउने विश्वासका साथ लुछाचुँडी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भनी चीरको खरानीको टीका लगाइन्छ ।
फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन फागुन २० गते वसन्तपुरस्थित गद्दी बैठकअगाडि मैलको रुखलाई रङ्गीचङ्गी ध्वजापताकासाथ सिँगारी गाडिएको चीरमा पूजाआजा गरेपछि फागु शुरु भएको थियो ।
त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले विष्णुभक्त आफ्ना पुत्र प्रह्लादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रह्लादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफैँ भष्म भएकी तर भक्त प्रह्लादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ । त्यसै बेलादेखि शक्तिको दुरूपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली (फागु) खेल्ने परम्परा चलेको मानिन्छ ।
यसैगरी द्वापरयुगमा श्रीकृष्ण भगवान्लाई मार्न कंशद्वारा पठाइएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो विष दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई मारिइन् । निजलाई व्रजवासीले जलाई फागु महोत्सव मनाउने परम्परा चलेको पनि धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।
फागु पर्वका उपलक्ष्यमा परम्परादेखि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिंँदै आएको छ । यस पर्वका उपलक्ष्यमा आजभोलि रमाइलोका निम्ति गाँजा, भाङ, जाँड–रक्सी जस्ता नशालु पदार्थको सेवन गरी गुन्डागिरी गर्ने, शरीरमा प्रतिकूल असर गर्ने खालका रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा सवारीसाधनमा समेत लोला हिर्काउने जस्ता विकृति पनि कम हुँदै गएको छ ।
फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज बेलुकी ७ः११ बजे चीर ढाल्ने साइत समितिले दिएको छ । आजै राति ८ः५१ बजे चीर घिसारेर टुँडिखेल लगी जलाएपछि फागु पर्व सकिन्छ । यस वर्ष पहाडी जिल्लामा आज र तराईका जिल्लामा भोलि फागु पर्व मनाइँदै छ । रासस
यसकारण प्रधानमन्त्री ओली चाँडो भन्दा चाँडो निको हुन जरूरी छ!
चितवनमा फेरि यस्तो घटना: ७० तोला सुन र ७ लाख पैसा चोरेकाे सिसिटीभीमा यस्तो देखियो (भिडियो हेर्नुस्)
भर्खरै : हातहतियारसहित १५ गाडी भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल छिरे…